Rio Ferdinand oo ka dhawaajiyay hadal ka careysiiyay Jamaahiirta Kooxda Liverpool… (Muxuu yiri?) – Gool FM
Rio Ferdinand oo ka dhawaajiyay hadal ka careysiiyay Jamaahiirta Kooxda Liverpool… (Muxuu yiri?)
Dajiye March 29, 2020
(England) 29 Mar 2019. Halyeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa ku baaqay in la joojiyo xilli ciyaareedka kubadda cagta ee horyaalka Premier League dalka England, haddii faafaha Coronavirus uu sii fidayo.
Daafacii hore xulka qaranka England ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in taageerayaasha kooxda Liverpool ay ka muhiimsan tahay dahana guud ee shacabka, hamigooda ah inay hantaan horyaalka Premier League.
Xiriirka kubadda cagta Ingariiska ayaa horey u shaaciyey in ciyaaraha oo dhan la hakiyay ilaa iyo 30-ka April, ugu dambeyn, si loo yareeyo halista faafaha Coronavirus.
Liverpool ayaa haatan ku hogaamineysa dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League 25 dhibcood, waxaana ay u baahan tahay kaliya lix dhibcood oo ka dhigeysa in si rasmi ah loogu caleemo saaro horyaalka.
Laakiin xiddigii hore kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaan daneyneynin in Reds ay sugeysay hanashada Premier League in ka badan 30 sanadood si ay ugu guuleystaan ​​horyaalnimada, isagoo ku baaqay in la baajiyo horyaalka.
Rio Ferdinand oo la hadlayay “PT Sport” ayaa wuxuu yiri:
“Waa inaan tixgalinaa in kubadda cagta ay tahay ciyaar, in kasta oo si dhab ah loo qaato, laakiin waxa ugu muhiimsan waa bulshada.”
“Fikradayda, haddii aanaan helin xal deg deg ah toddobaadyada soo socda, markaas waa in xilli ciyaareedkan gabi ahaanba la kansalo.”
“Waan ogahay in taageerayaal badan oo Liverpool ah ay dhihi doonaan, waxaad sidaas u dalbaneysaa, sababtoo ah ma dooneysid in kooxda ay ku guuleysato horyaalka”.
“Laakiin hadii kooxdeyda ay xaaladdan ku jirto, waxaan marka hore ka fikiri doonaa caafimaadka dadka iyo bulshada halkii ay ka aheyd faa’iidadayda shaqsiyeed.”
Jamie Carragher oo sharraxay sababtii ay Liverpool isaga diidday inuu macallin u noqdo Jose Mourinho
Pierre-Emerick Aubameyang oo kala hadlay Zidane ku biirista Real Madrid